ဒေသဆိုင်ရာ ထိန်းချုပ်မှု စက်တပ် လေးပုံတပုံ အလှည့် actuator ပေးသွင်း နှင့် ထုတ်လုပ်သူ - တရုတ်နိုင်ငံ အလုပ်ရုံ - AOX
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > လျှပ်စစ် Actuator > လေးပုံတပုံ အလှည့် လျှပ်စစ် Actuator > ဒေသဆိုင်ရာ ထိန်းချုပ်မှု စက်တပ် လေးပုံတပုံ အလှည့် actuator
ဒေသဆိုင်ရာ ထိန်းချုပ်မှု စက်တပ် လေးပုံတပုံ အလှည့် actuator
AOX-မေး စီးရီး ဒေသဆိုင်ရာ ထိန်းချုပ်မှု စက်တပ် လေးပုံတပုံ အလှည့် တစ်ဦးctuတစ်ဦးသို့r နိုင် ဖြစ် အသုံးချ သို့ အဆိုပါ လြှောကျလှာ လိုအပ် အချိုးကျ ထိန်းချုပ်မှု, နှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက် သို့rque နှင့် အကွာအဝေး ၏ 50N.m ~ 6000N.m.AOX ရှိပါတယ် ဖြစ်en ကတိသစ္စာပြု သို့ အဆိုပါ ပုံစံ နှင့် ပြုလုပ် ၏ အလွန်ကောင်းမွန်သော ဒေသဆိုင်ရာ ထိန်းချုပ်မှု စက်တပ် လေးပုံတပုံ အလှည့် တစ်ဦးctuတစ်ဦးသို့r နှင့် ထိန်းချုပ်မှု equipment.It ဖြစ် thဖြစ် အောင်မြင်သော positioning ကို နှင့် အားကြီးသော ကုန်ပစ္စည်း အရည်အသွေး အသိအမြင် ၏ အားလုံး ဖြစ်စဉ် ဝန်ထမ်းများ ထို ကြောင့် AOX တစ်ဦး ကုန်သွင်းသူ ၏ vတစ်ဦးlve တစ်ဦးuသို့mတစ်ဦးtion ဖြေရှင်းချက်။
အလုပ်လုပ်အချိန်: နှစ်ဦးစလုံးတွင်-ချွတ်နှင့် Module အမျိုးအစားအဘို့အ S1 အချိန်ကြာမြင့်စွာစံ။
S2 စံ, 30 မိ။
ambient temperatureï¼-20â ~ + 70â (-40â-60â optional ကိုဖြစ်ပါတယ်)
ရရှိနိုင်ဗို့အား၏ 1. Wide အကွာအဝေး။
အားလုံး interfaces IP67 (စံ) တွင်အို-လက်စွပ်အားဖြင့်နှင့် IP68 များအတွက်နှစ်ဆဏ-လက်စွပ် (option ကို): 2. တံဆိပ်ခတ်။
AOX-မေးစီးရီးဒေသခံထိန်းချုပ်မှုစက်တပ်လေးပုံတပုံအလှည့် actuator များအတွက် 3. Handwheel: လူမီနီယံအလွိုင်း၏လုပ် actuator torque ပေါ် မူတည်. အမျိုးမျိုးအရွယ်အစားအမျိုးမျိုး, အင်အားစိုက်ထုတ်စစ်ဆင်ရေး။
AOX-မေးစီးရီးဒေသခံထိန်းချုပ်မှုစက်တပ်လေးပုံတပုံအလှည့် actuator များအတွက် 4. Terminal နှင့်
ပြင်းထန်တဲ့တုန်ခါမှုအောက်မှာတင်းကျပ်စွာဝါယာကြိုးချိတ်ဆက်မှုအတွက်တင်တွန်းအားပေး type ကို terminal ကို -Spring ။
ဆိပ်ကမ်း၏ရတာဟာအရေအတွက်ကအသုံးပြုသူများအတွက် 22 ဖြစ်ကြသည်။
-Terminal အရှည်: 8-9mm
-Terminal အရွယ်အစား: 10A 22Ã 32
AOX-မေးစီးရီးဒေသခံထိန်းချုပ်မှုစက်တပ်လေးပုံတပုံအလှည့် actuator ကျယ်ပြန့်ရေကုသမှု, အပူ, ရေနံ, ဓာတုစက်မှုလုပ်ငန်း, လျှပ်စစ်ပစ္စည်း, အလင်းစက်မှုလုပ်ငန်း, အစားအစာ, ဆေးဝါး, အထည်အလိပ်, စက္ကူချမှတ်ခြင်း, ရေအားလျှပ်စစ်, သင်္ဘောများ, ရောစပ်အသစ်စွမ်းအင်နှင့်အခြားနယ်ပယ်များတွင်အသုံးပြုသည်။
တစ်ချိန်တည်းမှာကုန်ပစ္စည်းအရည်အသွေးကိုသေချာခုနှစ်, ငါတို့သည်လည်းထိန်းချုပ်များ၏အသေးစိတ်ကို, အထူးသဖြင့်ထုတ်ကုန်ထုပ်ပိုးဖို့အာရုံစိုက်, ချောထုပ်ပိုးထိရောက်စွာ AOX-မေးစီးရီးဒေသခံထိန်းချုပ်မှုစက်တပ်လေးပုံတပုံအလှည့် actuator ၏အသွင်အပြင်ကိုသေချာနှင့်ဖောက်သည်ကောင်းတစ်ဦးအတှေ့အကွုံကိုပေးနိုင်ပါသည်။
ပိုကောင်းတဲ့ကုမ္ပဏီရဲ့ AOX-မေးစီးရီးဒေသခံထိန်းချုပ်မှုစက်တပ်လေးပုံတပုံအလှည့် actuator ဖော်ပြရန်နှင့်ကုမ္ပဏီ၏လူကြိုက်များမြှင့်တင်ရန်နိုင်ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီတက်ကြွစွာဂျာမဏီ Valve လောက, AHEMA, ရုရှား PCV ကုန်စည်ပြပွဲ, ECWATCH, မလေးရှားအာရှအတွက်အိမ်မှာနှင့်ပြည်ပမှာအဓိကပြပွဲများတွင်ပါဝင် ရေ, ထိုင်း THAIWATER, အင်ဒိုနီးရှား Indowater, ရှန်ဟိုင်း Flowtech, etc.You သမျှသောဤပြပွဲမှာကျွန်တော်တို့ကိုတွေ့နိုင်ပါသည်။
Q: AOX-မေးစီးရီးဒေသခံထိန်းချုပ်မှုစက်တပ်လေးပုံတပုံအလှည့် actuator ၏စျေးနှုန်းကဘာလဲ?
မေး: AOX-မေးစီးရီးဒေသခံထိန်းချုပ်မှုစက်တပ်လေးပုံတပုံအလှည့် actuator ဘို့ငါတို့နိမ့်ဆုံးအမိန့်အရေအတွက်မည်မျှရှိသနည်း
ဖြေကျွန်ုပ်တို့၏နိမ့်ဆုံးအရေအတွက် 1 Piece ဖြစ်ပါတယ်။
hot Tags:: ဒေသဆိုင်ရာ ထိန်းချုပ်မှု စက်တပ် လေးပုံတပုံ အလှည့် actuator, တရုတ်, ထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်း, စက်ရုံ, အရည်အသွေး, advanced, Classy, နောက်ဆုံးပေါ်